म’हिनावारी हुँदा सहन नसक्ने गरि तल्लो पेट दु’खे के गर्ने ? स’मस्या र घ’रेलु उपाए – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारम’हिनावारी हुँदा सहन नसक्ने गरि तल्लो पेट दु’खे के गर्ने ? स’मस्या र घ’रेलु उपाए
म’हिनावारी हुँदा सहन नसक्ने गरि तल्लो पेट दु’खे के गर्ने ? स’मस्या र घ’रेलु उपाए
म’हिनावारी हुँदा धेरैलाई ख’पिनसक्नु पेट दु’ख्ने, बा’न्ता आउने, वा’कवाकी लाग्ने, ढाड र कम्मर दु’ख्ने, खान मन नलाग्ने र दैनिक काम गर्न बा’धा हुने हुन्छ । यस्तो समस्यालाई डि’स्मेनोरिया भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा दुखाई लामो समयसम्म पनि हुन सक्छ ।
केही महिलाले दु’खाई सहन नसकेर आफूखुसी औषधी सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन ।दुखाई बढी भए पनि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र औ’ष’धी से’वन गर्नुपर्छ । डि’स्मेनोरिया प्राइमरी र से’केन्डरी गरी दुई प्रकारको हुन्छ ।
प्राइमरी डि’स्मेनोरियामा म’हिनावारीको बेलामा तल्लो पेट, क’म्मर र ढाड दु’ख्छ । दुखाई बढ्दै गएमा खुट्टा र टाउँको दु’ख्ने, वा’कवाकी लाग्ने र बा’न्ता हुने लक्षण देखिन सक्छन् । कसैकसैलाई प’खाला पनि लाग्ने पनि हुन्छ ।यसका कारणहरुमा कम उमेरमा म’हिनावारी हुनु, इस्ट्रोजन र प्रो’जेस्टेरोन ह’र्माेनहरुको असन्तुलन हुन् ।
म’हिनावारी हुँदा पा’ठेघर खु’म्चिने र त’न्किने हुनाले तल्लो पेट दु’ख्छ । महिनावारीमा यौ’ना’ङ्ग’मा कुनै बा’धा आयो अथवा र’गत ब’ग्ने यौ न नली साँ’घुरो भयो भने पनि प्राइमरी डि’स्मेनोरियामा हुन सक्दछ । यो वंशानुगत कारणले पनि हुन सक्छ ।अत्याधिक मोटा र सुखमय जीवनशैली बिताउने युवतीलाई पनि यस्तो स’मस्याको सम्भावना बढी हुन्छ ।
से’केन्डरी डि’स्मेनोरिया २० वर्ष माथिको उमेर समूहका महिलालाई हुने गर्छ । यो प्राय विवाहिता महिलामा देखिने समस्या हो । यसका लक्षणहरुमा म’हिनावारी समयमा नहुनु र हुँदा र’गत धेरै ब’ग्नु, यौ न स’म्पर्क गर्दा यौ नाङ्ग दुख्नु, बाँ’झोपना र अ’त्याधिक से’तो पानी ब’ग्नु आदि हुन् ।
यस्तो अवस्थामा औ’ष’धीको से’वन गर्दा पनि दु’खाई कम नहुन सक्छ । प्र’जनन रो’ग, अ’ण्डाशय वा अण्डबाहिनी नलीमा स’मस्या देखिनु, लामो समयसम्म आ’इयुसीडी तथा क’पर टी’को प्रयोग, अनियमित औ’ष’धीको प्रयोगका कारण पनि यस्तो स’मस्या आउँछ ।डि’स्मेनोरिया आफैमा रो’ग होइन तर अन्य रो’गको लक्षण हो । त्यसैले समयमै रो’गका पहिचान गरी उपचार तर्फ लाग्नु पर्छ ।
दु’खाई कम गर्न घ’रेलु तरिका-दुध क्या’ल्सियमको निकै राम्रो स्रोत हो, म’हिनावारीको पी’डालाई कम गर्न एक ग्लास दुध पिउने गर्नुहोस् यसले क्या’ल्सियमको कमीलाई पुरा गरीदिनेछ र पी’डाबाट आराम मिल्नेछ । यदि तपाईलाई दुध मिठो लाग्दैन भने तपाईले क्या’ल्सियमको च’क्की पनि खान सक्नुहुन्छ ।
म’हिनावारी भएको बेला मेवा खानाले फाइदा पुराउँछ ।धेरैपटक म’हिनावारीको दौ’रान र’क्त प्रवाह सहि तरिकाले हुने गर्दैन जसका कारण अझ पी’डा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा मेवाको से’वन गर्नाले र’क्त प्रवाह ठिक तरिकाले हुने गर्दछ र पीडा पनि कम हुने गर्दछ ।
गाजरले आँखाको लागि राम्रो गर्ने मात्र नभई म’हिनावारीको पी’डालाई पनि कम गर्ने गर्दछ । स्त्री’रो’ग विशेषज्ञका अनुसार एक ग्लास गाजरको रस पिउनाले म’हिनावारी भएको बेला र’क्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्दछ र पी’डाबाट पनि राहत मिल्ने गर्दछ ।महिनावारीको दौरान एक चम्चा महमा घ्यू कुमारीलाई मिसाएर खानाले भइरहेको पी’डालाई कम गर्ने गर्दछ।
पी’डा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानुहोस् । तुलसीमा भएको क्या’फी’ड ए’सिडले म’हिनावारीको पी’डालाई कम गर्न गर्दछ । धेरै पी’डा भइरहेको छ भने ७-८ वटा तुलसीको पातलाई आधा कप पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् र त्यसलाई छानेर त्यसको पानी पिउनुहोस् । तातो पानीले नुहाउनुहोस्: तातो पानीले नुहाउनाले र’क्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा कम हुने गर्दछ ।
एक कप पानीमा अदुवालाई काटेर उ’माल्नुहोस् । यदि यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको तीन चार पटक खाने गर्नुभयो भने पी’डाबाट मु’क्ति पाइन्छ । हुन त हामीले दिन दिनै व्यायाम गर्नु जरुरी छ तर म’हिनावारीको पी’डा भएको बेलामा व्यायाम अत्यावश्यक कुरा हो । उक्त प्र’वाहलाई राम्रो गराउन व्यायामको निकै आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।
बिहान हरेक दिन खाली पेटमा ५० ग्राम भिजाएको खजुर खाने पानी पनि ला’भदायिक हुन्छ । चुकन्दरको ताजा रस सानो गिलासको ,१ गिलास दैनिक बिहान १ महिना सम्म पिउनाले आइरन क्या’ल्सियम र अन्य मिनिरलसको मात्रा बढी पाइने हुँदा दु’खाई लाई मद्दत पुग्दछ ।
यो’ग तथा प्राकृतिक चि’कित्सा-म’हिनावारीका बेलामा र’गत कम देखिएको छ र दु’खाई अत्यन्त बढी छ भने नि’मपानीको तातो क’टिस्नान लिनाले तत्काल पि’डा कम गर्दछ । यस्तो बेला बिहान र बेलकुा एक हप्ता सम्म २० ३० मिनेट लिनु ला’भदायिक हुन्छ । उ’ष्णपादस्नान ३८ देखि ४० डिग्री सम्मको तातो पानीमा ग्राम हालेर हरेक दिन विहान र बेलुका आफ्नो दुवै खुट्टा पानीमा डु’बाउनु पर्दछ ।
म’हिनावारी ब’न्द भएको तीन दिनपछि बाट म’हिनावारी सुरु हुनु ३ दिन अगाडि सम्म प्रत्यक दिन तातो क’टिस्नान लि’नाले, यो रो’गबाट पूर्ण रुपमा छु’ट्कारा पाउन सकिन्छ । एनिमा र पेट ,कम्मर मा’लिस गर्नाले पनि पि’डाबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।नियमित थे’रापेटिकल योग ,व्यायाम र सूर्य नमस्कार जस्ता आसन र प्राणयाम गर्नु पर्दछ ।